Bit By Bit - Privacy uye Usatenda Policy
Privacy uye Usatenda Policy
Website iyi, tiri kuita zvakakwana rugwaro Bit kuburikidza Bit: Social Research muna Digital Age iripo pasina mutengo. Paunenge uchiverenga bhuku, tiri kuyera muverengi nounhu uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa.. Somuenzaniso, tiri kuyera izvo zvikamu bhuku kuti verenga unowanzosangana. date Izvi zvichatibatsira kuvandudza bhuku. Tiri kumhanya kuedza-anowanzonzi A / B nemiedzo -zvinoshevedzera kuti atibatsire kutengesa zvakawanda makopi ebhuku. Zvose tiri kuita kwakakurumbira pamusoro Websites ano. We muirondedzere zvakadzama pazasi, uye tichaita zvinoratidza zvataita uye chii zvatakadzidza pamusoro Blog yedu .
Mashokoi isu unganidza?
Tinoshandisa Google Analytics kuunganidza ruzivo pamusoro sei iwe pamwe website iyi. Uyezve, kufanana Websites vakawanda, tinoshandisa Cookies munyatsonzwisisa ruzivo wako, unganidzai mukuru muenzi ruzivo, uye kuchengeta kushanyira Website yedu. Ndapota anoreva 'zvatinazvo kushandisa macookie ashande? " Chikamu pazasi mashoko pamusoro Cookies uye sei isu kuzvishandisa.
Sei tinoshandisa mashoko ako?
Chero mashoko kuti isu unganidza kungashandiswa tsvakurudzo, kuvandudza bhuku, uye kubatsira kutengesa bhuku.
Sei isu kuchengetedza ruzivo yako?
Tiri kushandisa siyana nokuchengeteka matanho kuramba kuchengeteka mashoko imi dzinotipa.
Vazhinji Browsing mashoko kuti tine inochengeterwa Google Analytics , uye iwe unogona kuverenga zvakawanda pamusoro kwavo kuchengeteka uye voga nenheyo .
Annotations kuti iwe wedzera vari neKomisheni hypothes.is , uye iwe unogona kuverenga zvakawanda pamusoro kwavo mazwi dzebasa .
Website redu raionekwa kubudikidza Github Pages , uye iwe unogona kuverenga zvakawanda pamusoro Github kuti mazwi dzebasa .
Ko isu kushandisa macookie ashande?
Hungu. Cookies zvidiki mafaira kuti nzvimbo kana nebasa rayo Provider anotamisa kuti zvakaoma ngarurege kombiyuta yako kuburikidza kwenyu padandemutande mubrowser (kana ukabvumira) kuti inoita nzvimbo kana basa vanopa hurongwa kuziva browser uye kubatwa uye yeuka mamwe mashoko.
Kuti ape iwe uri nani nzvimbo ruzivo, tinoshandisa Cookies kunzwisisa uye nokuponesa zvaunofarira yemberi Kushanya uye kuronga uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. mashoko pamusoro nzvimbo motokari.
Ko isu buritsa chero mashoko kunze kumapati?
Hatidi kutengesa, kutengeserana, kana zvimwewo kutamira kunze kumapati ruzivo yako pachako dzinozivikanwa kunze akavimba mapati rechitatu vanobatsira nesu kushanda Website yedu, kuitisa tsvakurudzo, kana kupa basa kwamuri, chero bedzi mapato avo vanobvuma kuchengeta mashoko aya zvakavanzika . Tinogonawo kusunungura mashoko ako kana tichitenda kusunungurwa zvakakodzera zvinoenderana nemurairo, manikidzira yedu yepaIndaneti policies, kana kudzivirira zvedu kana vamwe 'kodzero, pfuma, kana kuchengeteka.
pati Third Links
Apo neapo, panguva nokungwara kwedu, isu zvingasanganisira rinobatanidza kuti bato rechitatu Websites. Izvi yechitatu bato nzvimbo nevachena uye akazvimirira oga mitemo. Isu, saka, hamuna basa kana liability kuti kugutsikana uye mabasa ava chokuita nzvimbo. Kunyange zvakadaro, tinotsvaka kudzivirira kuvimbika kwedu nzvimbo uye ngativagamuchirei chero inofambiswa pamusoro nzvimbo idzi.
Kana muine mibvunzo, tapota titumirei email info@bitbybitbook.com .
Changes redu Privacy uye Usatenda Policy
Isu kuchengetera kodzero kuchinja edu zvakavanzika inozowana nguva nenguva yedu chete kungwara. Tapota nguva nenguva ongorora chikamu ichi zvamanga shanduro Privacy uye Usatenda Policy. All yedu yapfuura policies dzinoturwa pazasi, uye ticharamba kunatsurudza peji ino kana kuchinja chero inodiwa.